I-5 yeendaba zosasazo ezingafaniyo zeshishini | Martech Zone
I-5 yeendaba zosasazo ezingafaniyo zeshishini
NgoLwesihlanu, Meyi 16, 2014 NgeCawa, Meyi 25, 2014 Douglas Karr
Kutshanje, ndaye ndenziwa udliwanondlebe ndaza ndabuza ukuba zeziphi iinkampani ezingachananga ezenzayo xa ziphuhlisa kwaye zimilisela iqhinga labo kwimidiya yoluntu. Amava am anokuphikisana ne-gurus ezininzi phaya, kodwa -kunyaniseka konke-ndicinga ukuba eli shishini ekugqibeleni likhulile kwaye iziphumo ziyazithetha.
Imithombo yeendaba yeNtlalontle # 1: Imidiya yokuncokola sisiTayile seNtengiso
Iinkampani zihlala zijonga kwimithombo yeendaba zentlalo ikakhulu njenge Ijelo lokuthengisa. Imidiya yokuncokola yi ijelo lonxibelelwano enokusetyenziselwa ukuthengisa- kodwa ayisiyijelo lentengiso kuphela. Into yokuqala iinkampani ezisebenza kuyo xa zingena kwimithombo yeendaba zentlalo zihlala sisikhalazo- kwaye ngoku kufuneka zisombulule ngempumelelo kuba ilizwe libukele. Imidiya yokuncokola yilento elindelwe ngabaphulaphuli ngaphandle kwendlela inkampani yakho ejonga ngayo ijelo kufanele isetyenziswe. Ukungaphenduli kwezi zicelo kuya kutshabalalisa nasiphi na isicwangciso sentengiso seendaba zentlalo obusicwangcisile.
Imithombo yeendaba yeNtlalontle # 2: Ukubuya kutyalo mali kufuneka kube kwangoko kwaye kulinganiswe ngokulula
Iinkampani zifuna ukulinganisa ukusebenza kunye nokubuyela kutyalo-mali kwimidiya yoluntu kunye yonke i-tweet okanye uhlaziyo. Kufana nokulinganisa impumelelo yebhanti emva kokuba bethe igubu lokuqala. Imbuyekezo yakho yemidiya yoluntu kutyalo-mali inokulinganiswa kuphela emva kokuba uzise ixabiso kubaphulaphuli, ukuba abaphulaphuli (ukumamela) baba luluntu (babelana), kwaye wakha igunya kunye nokuthembela kumzi mveliso wakho. Ngamanye amagama, kuya kufuneka wenze umculo omnandi ngaphambi kokuba ulindele ukubuya! Kananjalo, ukubuya kwimidiya yoluntu kukhula ngokuhamba kwexesha-ukwakha amandla njengoko uthimba abaphulaphuli bakho kwaye wakhe uluntu oluqala ukungqina umyalezo wakho. Le bhlog ineminyaka elishumi ubudala kwaye kuphela kwiminyaka emi-5 edlulileyo apho ingeniso ikhule ukuya kwinqanaba lokwakha ishishini elijikelezileyo.
Imithombo yeendaba yeNtlalontle # 3: Ukuthengisa kufuneka kube luxanduva lweMithombo yeendaba
Oku kubhekisa ku- # 1, kodwa iinkampani zihlala zithintela imiyalezo yemidiya yoluntu kwisebe lezentengiso, abahlala bengakulungelanga ukuphendula. Ukuthengisa kuhlala kugqwesa ekwenzeni uphawu kunye nokuthumela imiyalezo - kodwa hayi ekuphenduleni. INkonzo yabaThengi, uLwalamano loLuntu kunye nabasebenzi beNtengiso zizibonelelo kwinkampani yakho ezibeka amathemba kunye nemithombo yeendaba mihla le, zimamele kwaye ziphendule kwiinkxalabo, kwaye ziqonde indlela yokujongana neenkcaso. Ukuhambisa isicwangciso esiliqili seendaba zentlalo kufuneka kubandakanye aba basebenzi ngelixa ukuthengisa kunceda ukwenza umyalezo, ukubeka esweni kunye nokwabelana ngejelo, kunye nokulinganisa ifuthe.
Imithombo yeendaba kwiNtlalo # 4: I-Mishaps yezoLuntu yezeNtlalontle ziinkampani ezitshabalalisayo
Iinkampani zikholelwa ukuba umyalezo wazo kwimidiya yoluntu kufuneka ugqibelele, ngaphandle kweempazamo. Usuku emva komhla, iveki emva kweveki, kunye nenyanga emva kwenyanga sibona le mizekelo intle yendlela iinkampani ezenze ngayo into ethi iingcali zemidiya yoluntu ziyibiza ngokuba ziintlekele zemidiya yoluntu. Banokuba neempazamo, kodwa kunqabile ukuba babe ziintlekele. Ukuba ujonga zonke iimpazamo ezintle kwimidiya yoluntu ziinkampani, uninzi lwalunalo AKUKHO mpembelelo kwintengiso, kumaxabiso esitokhwe okanye kwinzuzo. Iinkampani zinokwenza iimpazamo kwaye ziphinde zibuyele kubo ngokupheleleyo. Ngapha koko, sibonile apho ukungangqinelani kweempazamo kuhlala kukhulisa ukuthengisa kwenkampani ukusukela oko amajelo eendaba kunye namanye amaziko ezentlalo ewuchophela lo mbandela ngaphaya kwayo nayiphi na intengiso. Isicwangciso siza kwisisombululo sempazamo kwaye ukubuyisela kwakhona kunokuba yinzuzo enkulu kwishishini njengoko kwakha ukuthembana kunye nokunyaniseka kubaphulaphuli.
Imidiya yokuncokola Ingcamango # 5: Imidiya yokuncokola yaSimahla
Ukufumanisa, ukukopa, ukupapasha, ukuphendula kunye nokukhuthaza uphawu lwakho kwimidiya yoluntu ayikhululekanga. Ngapha koko, ukuba wenza umsebenzi owoyikisayo, inokuba yinkcitho enkulu yexesha namandla enkampani yakho. Ingakubiza intengiso endaweni yokwenza. Kwicala leqonga, amajelo eendaba ezentlalo afana neFacebook, iTwitter, kunye nePinterest anyanzelwa ngamandla ngabatyali mali babo ukwenza imali… ukuze amandla omyalezo wakho anyuselwe kumajelo asekuhlaleni ngaphandle kokuthenga abaphulaphuli anciphe yonke imihla. Ukuseka uhlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo zokufumanisa, ukukhusela, ukupapasha kunye nokuphendula kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze ukhulise ukufikelela kwakho kubalulekile.
Uyavuma okanye awuvumelani? Zeziphi ezinye izinto ezingalunganga okholelwa ukuba zikho phaya?
tags: iimpazamoiimpazamo zeshishiniiimpazamo kushishino kwimidiyakhululaiingcamango eziphosakeleyoingozimpazamoxanduvaiimpazamo kwimithombo yeendabaisicwangciso seendaba zoluntu
Isiqulatho seNtengiso seContundrum
Izibalo ezingama-25 zoThengiso lweSelfowuni zowama-2014
Meyi 20, 2014 kwi-9: 32 PM
Iinkampani ezininzi zikholelwa ukuba impumelelo kwimidiya yoluntu inokwakhiwa ngosuku. Abathengisi kufuneka basoloko benikezela ngolwazi olufanelekileyo kwaye bakhe inkampani yabo ukudala ubudlelwane obuhlala ixesha elide kunye nabathengi babo ukuze babone iziphumo ezingcono kwimikhankaso yabo yemidiya yoluntu.